Mogadishu Journal » Madaxweyne Deni oo qaabilay wafdi heer Federaal ah
Madaxweyne Deni oo qaabilay wafdi heer Federaal ah
Mjournal -Wafdi isugu jiro Xildhibaano iyo Wasiiro ka tirsan xukuumada Soomaaliya ayaa maanta goor dambe u duulay Magaalada Garoowe oo lagu qabtay isla maanta doorashada madaxweynaha iyo ku xigeenka maamulkaasi.
Markii ay ka dageen garoonka diyaaradaha Garoowe durbadiiba waxa ay la kulmeyn Madaxweynaha cusub ee maanta la doortay ee maamulkaasi Saciid Deni.
Wafdigan ka socday dowladda federaalka Soomaaliya ayaa Mudooyinkan Ku Xayirnaa Magaaladda Muqdisho ka dib Amarkii dhawaan ka soo baxay Madaxtooyadda Magaaladda Garoowe.
Maamulka Puntland ayaa kol sii horeysay soo saaray amar ah in dhamaan masuuliyiinta xukuumada federaalka Saoomaaliya aysan soo caga dhigan karin inta lagu gudo jiro doorasho, waxa ayna ku micneeyeen in ay kaga hortagayaan faragelin lagu sameeyo doorashada.
Axmed Cilmi Karaash oo noqday madaxweyne ku-xigeenka Puntland
Kulamo ka socda Garowe